Clay Ala: Atụmatụ maka Imezi & Imeziwanye Ala Gị - Ala Na Fatịlaịza
Clay Ala: Atụmatụ maka Imezi & Imeziwanye Ala Gị
Chọpụta ihe ịrịba ama nke ala Clay
Etu aga-esi meezigharị ala ụrọ
Lelee Ala Mmiri nke Mbụ
Adịghị workrụbiga Ala Ike
Tinye Mmezi Ogo
Tụlee Ala Nrụpụta Mulches
Ghaa akwukwo ihe nkpuchi
M Kwesịrị Iji gypsum?
Nọgide na Clay? Uzo esi aga na ubi
Na-ekpo ọkụ ma kpuchido ala gị
Aro Osisi Mgbe Grow Na-eto na Clay
Ihe nkpuchi kacha mma
Ogologo Mgbọrọgwụ Ogologo
Ahapụkwala Nzọụkwụ A Dị Mkpa
Mgbe m na-etolite, mama m na-eme mkpesa mgbe mgbe maka papa m banyere ubi ya na akwa ifuru ya. Ọ ga na-ekwu ihe dị ka 'Ọ dịghị ihe na-eto na unyi uhie a!', Ma ọ bụ 'Anaghị m akụ ihe ọ bụla n'afọ a, ọ dịghị eto!'
Echere m mgbe niile na mama m enweghị mkpịsị aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ngwa ngwa ngwa ihe dị ka afọ iri abụọ, ma ugbu a, m ghọtara mgba ya.
Igwu ala n’elu akwa ifuru m na ubi m na-adịbu ka igwu egwu n’ime nnukwu apịtị a hapụrụ n’anyanwụ ka ọ kọọ. Okooko osisi na akwukwo nri m kụrụ na-egosi mgbe niile ihe nrịba ama nke mmiri nke ukwuu. N'ihi ee, enwere m ala ụrọ .
gini na-eri roly poly chinchi
Achọpụtala m ụzọ ole na ole mere ka mma nke ogige m na ifuru akwa akwa. Ndụmọdụ ndị a emeela ka mbọ m na-agba n’ubi ahụ na-amị mkpụrụ ma na-egbughị oge.
Ka anyị bido na nke mbụ: ịchọpụta ma ọ bụrụ n’ezie i nwere ala ụrọ. Mgbe ahụ, m ga-egosi gị ihe ị ga - eme iji dozie ya.
Mpekere ụrọ kpọrọ nkụ na-ekpo ọkụ, na -emepụta ọnya nke ahịhịa ahihia nwere ike ịdaba.
Nye m, nnukwu nsogbu m nwere n'ụrọ ụrọ kpụkọrọ akpụkọ bụ imerụ unyi ahụ. Ọ dị arọ ma ọ dịghị mfe igwu ma ọ bụ igwu n'ime ya.
Na mgbakwunye na nke ahụ, enwere m ala mmiri jupụtara na mmiri ọ bụla mgbe snow gbazee. Mmekọrita na - eduga n’ịgbachapu mmiri, nke ahụ na - edugakwa n’inweta olum. Osisi nwere ike isetịpụ ezigbo mgbọrọgwụ.
Nke mbụ, ọ dị mkpa ka ị chọpụta ma ọ bụ ụrọ bụ nsogbu ahụ. Nnwale a dị mfe ga-enyere gị aka ịchọpụta ụdị ala ị na-emeso.
Bulie otu njuaka ala. Ghichaa ya n'ọbụ aka gị. Ọ bụrụ na ọ na-etolite ụdị soseji ma na-anọkọ ọnụ mgbe ị na-emepe aka ụrọ ya dabere na ala ya. Okwute Sandier ga - adighi ngwa ngwa ma oburu n'inwe aka na ala.
Ọzọkwa, lelee agba ala gị. Ọtụtụ bara ọgaranya na iron oxide, nke na-enye ala ụda ọbara ọbara ma ọ bụ nchara nchara. Nke a abụghị eziokwu zuru ụwa ọnụ, mana enwere ike ịnye aka. Ala ụrọ uhie na-abụkarị ihe a na-ahụkarị gburugburu ụwa.
N'ikpeazụ, e nwere usoro 'ụrọ ụrọ'. Mee sọsọji ahụ a kpọtụrụ aha n’elu, wee tụgharịa ya n’etiti mkpịsị aka gị iji mee ka ọ bụrụ agwọ dị gịrịgịrị ogologo. Ala nke jiri isi ike rapara na agwọ ya n’ihe karịrị sentimita abụọ n’ogologo, nwere ike ịbụ ụrọ.
Gbakwunye mulch na ala ụrọ gị dị arọ na-ewuli ala ahụ na oge.
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ m chọpụtara nke nyeere aka melite ala ụrọ m. Ihe ndị a na-emekwa ka ọrụ ubi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ na obere mmeghachi azụ.
E nwere ụzọ abụọ esi arụ ọrụ na ala ụrọ: mgbe ọ na-adị mmiri mmiri, ma ọ bụ mgbe ọ kpọrọ nkụ.
Ihe ọ bụla dị n'etiti ga-eme ka ala ahụ rapara na shọvelụ gị ma bụrụ ihe mgbu iji merie. Ọ na-akụda ma na-arapara n'ahụ, ọ bụkwa ihe na-agaghị ekwe omume. Ya mere, ọ dị mkpa igwu naanị mgbe ala ahụ bụ nke bụ apịtị ma dị oke nro, ma ọ bụ mgbe ọ kpọnwụrụ kpamkpam.
Ọbụna mgbe ahụ, kpachara anya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ala mgbe ọ dị mmiri mmiri, ị ga-emepụta mkpụkọ siri ike nke unyi ozugbo ọ kpọnwụrụ. Nanị ụzọ ị ga-esi gbochie nke a bụ imezigharị ala nke ukwuu ebe ọ ka bụ apịtị, yabụ na ị nwere ike imebi mkpokoro niile na ọbụnadị ngwakọta ahụ.
Ihe jikọrọ ya na ngalaba ikpeazụ bụ ka ị ghara ịrụbiga ọrụ ókè n’ala gị. Ọ bụrụ na ị pụọ ma gbanwee ala mmiri gị n'emeghị mgbanwe ọ bụla, ihe niile ị ga - ejedebe bụ ụyọkọ nke okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ. Onye ọ bụla nke mesoro ihe mgbochi ụrọ dị arọ maara na ọ na-esiri ha ike ịhapụ mgbe e mesịrị!
N'otu uzo ahụ, gbalịa izere ịchekwa ala gị nke ọma. Ejela ije na mpaghara ị na-emeziwanye. Clay na-ejikọ onwe ya ma ọ bụrụ na gị, ụmụaka, ma ọ bụ anụ ụlọ gị na-eje ije na ya. Ihe niile ị na-eme na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ.
N'agbanyeghị oge ọ bụla n'afọ ọ bụ, ịgbakwunye compost meworo agadi nwere ike ịba uru. Compost jupụtara na ihe ọkụkụ nke ga - enyere aka mebie ụrọ ahụ. Ọ dịkwa nnọọ ezigbo mma maka osisi gị n’ozuzu, ma nwee ike inye aka melite uto ha nke ukwuu.
Biochar bụ nhọrọ ọzọ. Unyi a na unyi nwere ike inyere aka meziwanye drainage na ala ụrọ ma ọ na-agbakwụnyekwu ihe ndị na-emepụta ihe iji mebie clods. Ọ nwetawo ewu ewu na ugbo, kwa, ma na-amalite dochie gypsum n'ọtụtụ ebe.
Tụlee ịhọrọ perlite ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu drainage. Perlite na - enyere aka idozi ụzọ ụzọ ghere oghe maka mmiri ka ọ ghaa, ma na - emekwa ka ala gị gharazie ịfụfụ, nke dị mma maka ịgbari ihe ọkụkụ dị ka compost.
Na-achọ ka esi meziwanye ala ụrọ maka ahịhịa? Tụlee iji greensand . A na-eji ah ụ mmiri a na-akpọ glauconite mee Greensand, ọ n’emezi ụrọ ka ọ na - agbakwunye nnukwu micronutrients na ezi potassium maka ahịhịa gị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ubi, kwa!
Mgbe ihe ọ bụla dara, tụlee ịrụ ọrụ na ngwakọta ala na-azụ ahịa. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị na ahịa, ma na-arụ ọrụ na oge na-aga ga-eji nwayọọ nwayọọ melite usoro elu nke ala gị.
Imezigharị ala na ahịhịa mulch mma ya dị ka ọ mgbari.
Jiri compost, ogbugbo, mulch, ahihia ahihia, ahihia ahihia, ma obu okpokoro kpuchie ebe ị na-arụ ọrụ. Ejiri m shav n'ọba m. Gbalịa kpuchie ebe ndị a na-arụ ọrụ 2-3 ″ miri emi na ihe ndị a.
Mgbe ị gbakwunye ngwaahịa dị ka nke a n'elu ala gị, ihe ndị ahụ na-amalite ire ere ma gbarie. Ka oge na-aga, ha ga-arụ ọrụ n'ime ala gị, na-enyere aka ime ka ala ahụ gbajiri ma rụọ ọrụ na afọ ndị sochirinụ.
Mgbe ị wepụrụ isi kabeeji ikpeazụ na mgbụsị akwụkwọ, kụọ ihe ọkụkụ. Ọ na-amasị m iji osisi hay na-arụ ọrụ na ala ahụ dị ka compost organic na mmiri. Agbalịrị m ihe ọkụkụ ndị ọzọ na-ekpuchi dị ka klova, alfalfa, na buckwheat.
Ọbụna na ndụmọdụ ndị a, ọ gaghị abụ ntụgharị ọsọ ọsọ. Ndo, mana o nwere ike were ọtụtụ afọ tupu ị chọpụta ọdịiche dị na ala ubi gị.
Ọtụtụ mgbe, nkwanye ozugbo nke ogige ogige bụ ịgbakwunye gypsum na ala gị. Adịla ngwa ngwa ime nke ahụ, n'agbanyeghị. Gbaa mbọ hụ na ọ dị mma maka ogige gị.
Mmetụta nke gypsum na ala iji kewaa ụrọ granulu dị mkpụmkpụ. N'ezie, ọ na-adịgide naanị ọnwa ole na ole. O nwekwara mmetụta ndị ọzọ na-adị ogologo ma na-enye nsogbu.
Gbakwunye gypsum na ala gị nwere ike ime ka ị nweta ịnweta ịnweta na nri edozi. Leaching nke aluminom ma obu sodium nwere ike idi nma dika o n’eme ka ala ghara ire, ma leaching nke iron ma obu manganese nwere ike bute erimeri edozi n’anu gi. O nwekwara ike ibute ụkọ mineral ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, gypsum nwere ike ime ka o sie ike mycorrhizae bara uru na ala gị ịrụ ọrụ ha. Ọganihu ndị ahụ bara uru na-enyerekarị osisi gị aka iri nri na-edozi ahụ n'ụzọ dị mfe karị, na ịchọghị ibelata uto nke osisi gị!
.B. Mahadum Washington State University nyochara isiokwu a nke ọma. Nkwenkwe ahụ bụ na ọ bụ ezie na e nwere ngwa maka ala ugbo azụmahịa, ma ọ bụ maka oke ala kpara ike ma ọ bụ ala nwere mmetọ sodium, ọ bụ naanị adịghị arụ ọrụ nke ukwuu n'ọtụtụ ogige ụlọ.
Gbalịa imebi okpukpu ụrọ siri ike tupu ị kụọ, gbakwunye compost.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere aja ụrọ, kedu ka ị ga - esi gbaa ya gburugburu? Ọfọn, ka anyị mebie nke ahụ ntakịrị.
Mee akwa akwa n’elu ebe pere mpe. M na-eji elu ala ahịhịa na-eto tomato m na akwa akwa.
Nke a mere ka ọ dịrị m mfe ịrụ ọrụ n’ogige ahụ, ebe ọ bụ na àkwà ndị ahụ na-etinye ihe ọkụkụ n’ebe a na-arụ ọrụ nke ọma. O mekwara ka nkịta na ụmụaka ghara ịkọkọ ala m na-arụsi ọrụ ike ịgbanwe.
Enwere ụdị akwa dị iche iche dị iche iche, site na ndị na-akụ ụdị osisi na ụdị ụdị ogige mara mma. ’Ll ga-eme ka ubi gị ka mma ma nwee ike itolite ọbụlagodi n’emeghị mmezi ala dị mkpa na ụrọ gị.
N'oge opupu ihe ubi ala na-agbanye mmiri n'ihi oke snow anyị na-enweta. Nke a na - eme ka ịmalite osisi ahịhịa dị n’ubi ahụ sie ike.
Ihe ngwọta m na-agbakwunye igbe windo griinụ mepụtara site na windo windo. Typedị obere griin haus ma ọ bụ oyi etiti enwere ike wulie n'ime awa ole na ole ma obu obere.
ụzọ kasị mma iji chekwaa galik ogologo oge
Oghere oyi ma ọ bụ ụdị griin haus ga-egbochi snow nke mpaghara gị na-eto eto, nke na-enyere aka belata nsogbu drainage na akwa ogige. Ọ na-emekwa ka ala dị n’okpuru ya dị ọkụ karị, nke na-enyere aka igbochi ihe ọkụkụ na uto ihe ọkụkụ.
Mgbe m mulch m akwa n'elu oyi, n'ihi na snow na mmiri ozuzo nwere ike n'ezie ala ala iferi. Mkpo osisi na-arụ ọrụ nke ọma. Pụrụ ọbụna oyi akwa ubi na oké oyi akwa nke ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa clippings.
Mulch na - enye aka igbochi ala gị ka ị ghara ịbanye n’ime steeti siri ike n’oge ọnwa ọkọchị. Ọ bụrụ n ’ị nwere ebe dị ka ihe chachara cha cha mgbe anwụ chachara ha ruo nwa oge, mulch nwere ike inye aka mee ka ha dị ka ala kama ịtụgharị ha ka ha bụrụ mbadamba nkume a na-agaghị abanye.
Ọbụghị naanị na mulch gị ga - eji nwayọ rụọ ọrụ n’ime ala ya ma melite ala ya, mana ka ọ na - akwatu ọ ga - enye nri ndị ọzọ maka osisi gị. Ọ nwere mgbakwunye dị ukwuu nke inye aka igbochi ọtụtụ ụdị ahịhịa!
Ọka na-eto n’ubi nwere ụrọ dị arọ.
Osisi ndị na-eto eto n'ụdị ala a dị ọtụtụ ụdị. Nke a bụ nhọrọ ole na ole dị iche iche maka ịhọrọ.
Grassdị ahịhịa gị na-adabere n'ọnọdụ gị. Osisi dị iche iche na-arụ ọrụ kachasị mma na ihu igwe dị iche iche.
Maka ndị mmadụ na mpaghara dị jụụ, ụdị ahịhịa dị jụụ nke na-eto n'ala ụrọ na-agụnye fescues (ọkachasị fescue na uhie fescue), ryegrass kwa afọ na nke perennial, ahịhịa na-atọ ụtọ nke colonial, na Kentucky bluegrass.
Ndị mmadụ nọ na mpaghara ọkụ nwere ike ịchọ ịkụnye plọg nke ahịhịa na-ekpo ọkụ n'oge dị ka ahịhịa Bermuda, ahịhịa buffalo, Saint Augustine, ma ọ bụ zoysia. Ihe ndị a nile na-anabata ala ala ụrọ.
N’afọ ndị a ga-agbanwe ala ahụ, ahụrụ m osisi ụfọdụ na-eme nke ọma na ụrọ. Echere m na ozi a nwere ike ịchekwa gị oge na mbọ dị ukwuu, chebe gị ibibi osisi, ma chekwaa ego, kwa!
Cropsfọdụ ihe ọkụkụ na-eto nke ọma gụnyere letus, chard, snap beans, broccoli, Brussels sprouts and kabeeji. Osikapa na-eto nke ọma na ụrọ n'ihi mmiri na-adịgide adịgide na ịdị arọ nke ala.
Brassicas ndị ọzọ na-enweghị nke ọma dịka kọlịflawa ma ọ bụ broccoli nwekwara ike ito eto na ụrọ, dịkwa ka ọka na-atọ ụtọ, skwọsh, ma ọ bụ ugu. Ndị nke atọ a nwere mgbọrọgwụ siri ike nke nwere ike ịkwasa ụrọ ahụ n'akụkụ.
Mulching gburugburu gị akwụkwọ nri nwere ike belata ihe ize ndụ nke fungal ọrịa ndị si ala mmiri ma ọ bụ apịtị splashing jidesie osisi epupụta.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ị wulite akwa dị elu ka ị kụọ ihe ubi ndị ọzọ, ị nwere ike mgbe niile soro ndị agbata obi gị ma ọ bụ ndị enyi gị na-azụ ahịa maka ahịhịa ndị na-eto nke ọma na ala ndị emeziri emezi, ma rapara naanị na ndị na-arụ ụdị ala gị.
Ọ bụrụ na ị nwere akwa ifuru ma ọ bụ na-eto ubi ifuru, ndị a bụ ụfọdụ n'ime osisi na-arụ ọrụ kachasị mma na akwa m.
Aster : Daisy-dị ka okooko osisi na pink ma ọ bụ odo odo hues.
Nwa Nwee Oji : Ọgaranya gold petals na a gbara ọchịchịrị aja aja ma ọ bụ nwa center.
Sage Russia: Nke a nwere ike ịbụ mkpasu iwe, mana ọ mara mma nke ukwuu na obere odo odo.
Daylilies: Adị dịgasị iche iche dị. Mkpụrụ osisi ndị a na-emeghe n'ehihie ma na-emechi n'oge mgbede.
Yarrow: Ifuru a na-acha odo odo zuru oke maka ndokwa ifuru.
Coreopsis: Ndị a dị mma maka oke ala, ma nwee okooko osisi pink ma ọ bụ odo odo.
Coneflowers: Perennials na-acha odo odo nke gbakwunyere n’ubi ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịchọrọ osisi ndị ọzọ nke na-agaghị eto na ụrọ, zụta akpa ma debe ha na gburugburu ya. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye gị ike ịkọ ahịhịa na-ahọrọ ala ọkụ, mana ihe nkedo na-enye ihe dị elu na-agbanwe agbanwe ma na-eju anya mgbe ha jupụtara na ifuru.
M ahụmahụ bulbs emela nke ọma. Ọ bụghị naanị na ha chọrọ ala na-ekpo ọkụ, mana ha anaghị eme nke ọma mgbe ala dị egwu ma nwee ike ịmalite bulb rots.
Offọdụ n'ime ihe ọkụkụ kachasị mma maka ala ụrọ bụ klova, ọka wit n'oge oyi na buckwheat. Ihe ubi dika alfalfa na fava agwa nwere mgbọrọgwụ miri emi nke mere na ha na-adọta nri n'ime ala dị elu ma n'otu oge ahụ na-enyere aka na compaction.
Y’oburu n’ichoo ime ihe nkpuchi akuku, rue ya n’ime ala na njedebe nke oge ogha. Nke a na-agbakwunye ụmị nke ihe ọkụkụ nke na-agbada n'ime ala, na-agbakwunye nri na-edozi ahụ mgbe ọ na-emebi ala ala. Jide n'aka na ị ga-erugharị ma ọ dịkarịa ala izu ole na ole tupu ịmaliteghachi ịmalite usoro ire ere.
Ozugbo graded, ụrọ nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ya elu maka a ụzọ n'oge akọrọ ihu igwe.
Na-eju anya! Ọ bụghị akụkọ ọjọọ niile.
Ọtụtụ ala ụrọ na-abụkarị nke na-eme nri karịa ụdị ala ndị ọzọ. Ngwakọta nke ahịhịa nke ala na-eme ka ọ ghara ịkụcha mmiri, nke ga-asacha ọtụtụ nri nri.
Kwesighi ị toụ mmiri mmiri mgbe ụfọdụ na ụrọ. Ọ na-ejigide mmiri ngwa ngwa karịa ụdị ala ndị ọzọ, na ịkwesighi ịgbakwunye vermiculite ma ọ bụ mmezi ndozi mmiri ọzọ.
Nwere ike ọ gaghị adị mkpa ifatilaiza mgbe niile. Ebe ọ bụ na ụrọ ahụ dị mma ma na-arapara n'ahụ, fatịlaịza na-anọkarị ala. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ọ dịghị mkpa ka ifatilaiza ọ bụla! Nwere ike ịme ya obere oge.
Ozugbo mgbọrọgwụ osisi malitere, ntọala siri ike nke ala nwere ike bụrụ nnukwu ntọala maka ọtụtụ ụdị ahịhịa. Mgbọrọgwụ ga-anọgide na-adịgide adịgide na ebe, ma enwere ike ichebe ya site na mgbanwe okpomọkụ.
M ga-eti ugbu a ị na-enwe mmetụtatụ ka mma banyere ala ubi ahụ ị na-akọ ọnụ!
N'agbanyeghị otu ị họọrọ iji meziwanye ala gị, echefula otu afọ nke ịmegharị ala gị ozugbo ịmalite. Nọgidenụ na ya iji wuo ala ka mma.
Ọ naghị ewe oge maka ala ịlaghachi na nke siri ike, nke nwere nsogbu ma ọ bụrụ na ị nọgideghị na-agbakwunye ihe ọhụrụ na ya. Ebe ọ bụ na ị gafere ọtụtụ mgbalị iji mezie ala ahụ na nke mbụ ya, ịnọgide na-enwe ya kwa afọ dị mfe karịa ịmalite site na ọkọ!
Mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, ịnwere ike ịgbanwe ọdịdị ala gị n'ozuzu, na-eme ka nke a ghara ịbụ ihe dị mkpa kwa afọ. Mana ọ ka mma ịbanye n'ime ya ebe ị maara na ịkwesịrị ịrụ ọrụ a dị mfe kwa afọ maka oge. O ruru oge na mgbalị.
Banyere chepụtara: Alex na-ede maka Osisi , onye ahọpụtara masịrị Sheds, garages, na cabins. Ọ bụ omiiko banyere nkwado, ndụ dị mma, ezigbo nri na mmega ahụ.
nne iwu ire ire aka
esi ọcha nnọọ nke imeobodo ngwaọrụ
kedụ ka osisi kanwụla dị
esi elekọta a potted meyer lemon osisi